musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Kudzoreredza muNhamba dzeVapfuuri Kunoenderera kuFRAPORT
nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Germany Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Fraport inogamuchira murakatira muripo wekuchengetedza mashandiro kuFrankfurt Airport
KuFRAPORT Nhandare nendege traffic inoona kukura kwakasimba, ichisimbisa chinzvimbo cheFRA senzvimbo inotungamira yekuendesa ndege kuEurope. Zvikwata zveFraport Group pasirese zvakare zvinonyoresa kuwana kwemigwagwa.
The Fraport Traffic Figures kubva munaJune 2021 inoratidza Kujekesa kwakajeka muPassenger Nhamba.
MunaJune 2021, traffic yevafambi yakaramba ichidzoka, kunyangwe hazvo kuenderera uye kwakapararira kwechirwere cheCovid-19.
Frankfurt Airport (FRA) yakashandira vamwe 1.78 mamirioni vafambi mumwedzi wekuzivisa.
Nhamba dzemigwagwa kuFRAPORT dzinomiririra kuwedzera kweanosvika mazana maviri muzana kana June 200.
Nekudaro, chiyero ichi chakavakirwa pane yakaderera bhenji bhenji yakanyorwa munaJune 2020, apo traffic yaive pasi mukati mekukwira kweCovid-19 hutachiona huwandu. Mumwedzi wekuburitsa, kuderera kweCovid-19 zviitiko zvemitero pamwe nekusimudzwa kwezvirambidzo zvekufamba zvakaramba zvichikanganisa kudiwa kwemotokari. Kwenguva yekutanga kubva pakatanga denda, Frankfurt Airport zvakare yakagashira vanopfuura zviuru makumi masere vatakuri pazuva rimwe chete, yakanyorwa mumazuva maviri akaparadzana muna Chikumi 80,000.
Kana ichienzaniswa neye pre-denda muna Chikumi 2019, FRA yakanyoresa kumwe kuoneka kwevatakurwi kuderera kwe73.0 muzana mumwedzi wekuzivisa.1 Pakati pehafu yekutanga ya2021, FRA yakashandira vafambi vanosvika mamirioni 6.5. Zvichienzaniswa nenguva imwechete yemwedzi mitanhatu muna 2020 uye 2019, izvi zvinomiririra kuderera kwe46.6 muzana uye 80.7 muzana zvichiteerana.
Mukupesana, kukura kwekukura mumigwagwa yekutakura zvinhu kuRA kwakapfuurira kunyangwe kushomeka kuri kuramba kuchiita kwedumbu kugona kunowanzo kupihwa nendege dzinofamba. MunaJune 2021, kutakura zvinhu (kunosanganisira kutakura nendege uye nendege) kwakakwira ne30.6 muzana pagore-kusvika-gore kusvika ku190,131 2019 metric ton - yechipiri vhoriyamu yepamusoro yakambonyorwa mumwedzi waJune kuFRA. Kuenzaniswa naJune 9.0, nhumbi dzakakwira 114 muzana. Uku kukura kwakasimba kunosimbisa chinzvimbo cheFrankfurt Airport senzvimbo inotungamira yekuendesa ndege kuEurope. Kufamba kwendege kwakakwira neinopfuura zvishoma gumi nemana muzana muzana-gore-pagore kusvika makumi maviri ne20,010 kubva uye kumhara. Yakaunganidzwa yakakwira kurebesa matoremu (MTOWs) yakakwira ne 78.9 muzana kusvika ingangoita 1.36 mamirioni ematani munaJune 2021.
Nhandare dzeFraport Group kutenderera pasirese dzakanyorawo kukura kwekufamba kwemota muna Chikumi 2021. Kune dzimwe nhandare, traffic yakawedzera nezana mazana muzana - kunyangwe zvichibva padanho rakadzikira kwazvo remotokari muna Chikumi 2020. Nhamba dzevatakuri panhandare dzese dzeFraport dzenyika dzese. yanga ichiri pazasi peiyo pre-denda mazinga aJune 2019.
Slovenia's Ljubljana Airport (LJU) yakagamuchira 27,953 vafambi mumwedzi unoshuma. Panhandare yendege yeBrazil yeFortaleza (FOR) nePorto Alegre (POA), traffic yakazara yakakwira kune vafambi 608,088 806,617. Mumuzinda wePeru, Lima Airport (LIM) yakagamuchira vafambi 2021 XNUMX muna Chikumi XNUMX.
Nhandare gumi nenhatu dzeGreek nhandare dzakashandira vangangosvika mamirioni 14 muna Chikumi 1.5. Pamhenderekedzo yeBulgaria Nhema Gungwa, huwandu hwenhandare dzendege dzeTwin Star dzeBurgas (BOJ) neVarna (VAR) dzakakwira kuva 2021 vafambi. PaTurkey Riviera, Antalya Airport (AYT) yakaona traffic ichikura kusvika vangangoita mamirioni 158,306. Vhoriyamu yevatakurwi paSt. Petersburg's Pulkovo Airport (LED) muRussia yakakwira kusvika pamamirioni 1.7. MuChina, Xi'an Airport (XIY) yakanyoresa kuwana kwemotokari kwe1.9 muzana gore-ne-gore kune vangangoita 31.8 mamirioni.
Mukupfupisa, ese AYT nendege dzechiGreek dzakatambira vangangoita vakawanda sevatariri seFRA yekumba-base airport muna Chikumi 2021, nepo vaviri vakatakura vafambi vakapfuura neXIY. Izvi zvinoratidza kushanda kwakasimba kweiyo Fraport yepasi rose airport.